Ngaba Uke Wazibuza Ngeliphi Iikhompyutha ZeGoogle?
Web & Search Khu seleko kunye noBucala
Yilokho iithambile zeGoogle
Yonke Intshisekelo yeevidiyo ze-YouTube / i-View Is Logged
Ewe, zonke ividiyo ozibukeleyo zibhalwe! Ewe, i-Google yolwazi zonke ividiyo ze-YouTube ozijongayo, kunye negama elilodwa elingundoqo elikhangelelayo.
Ingaba uyayithanda okanye ayifuni, i-Google, i-Facebook, ne-Bing ilandelela yonke into oyenzayo kumaziko abo. I-Google ibaluleke ngokukhawuleza, kuba i-Google iphinda ithatha into oyenzayo kwizigidi zewebhsayithi zeqabane ezisebenzisa isofthiwe ye-Google Analytics.
Kubasebenzisi beGoogle, oku kuthetha ukuba yonke into eyenziwa, yonke ividyo okanye iphepha lewebhu ovulekileyo, yonke i-geolocation oya kuyo, kunye nazo zonke iigqeba zokuthengisa ozimelayo zonke ziqhotyoshelwe kwi- akhawunti yakho ye- Gmail kunye nekhompyutha yakho.
Injongo ebhengeziweyo yale nkqubo yokulandelela kukunika ukukhangisa okujoliswe kuyo ekuthandweni kunye nemikhwa yakho. Kodwa oko kuphela yinjongo ebhengeziweyo. Imigqa yemikhwa yakho yewebhu ingasetyenziselwa ukuthotyelwa komthetho kunye nabani na okwazi ukufikelela kwezo zixhobo ezinkulu.
Ngoko, oku kungenakunqwenelekayo malunga nokusebenzisa i-intanethi: ukuba ukhetha ukusebenzisa i-Google imikhiqizo, uyavuma ngokucacileyo ukutyhila iingxenye zobomi bakho kwi-Google corporation kunye nabalingani bayo. Amaphepha alandelayo achaza iindawo ezibanzi ezi-6 zeenkcukacha zeGoogle ezithathayo malunga nawe:
Ukukhangela kunye neembono zakho ze-YouTube
Icandelo lakho lokungena kwi-Market
Indawo Yakho Yomzimba kunye neMbali Yokuhamba
Iinkcukacha zakho ze-Gmail / i-Google Plus yabantu
Nonke i-Google Usesho Oyenzayo
Imibuzo Yakho Yezwi leGoogle
Kukho iindaba ezilungileyo, nangona kunjalo: unalo ulawulo olunxenye phezu kwalo mkhondo, kwaye ukuba ukhetha ukwenza umzamo, unokunciphisa iGoogle engayibona ngayo kwi-digital yakho nobomi bakho.
I-Google inayo i- YouTube . Ngoko ke, i-Google ilandelela yonke uphando olwenzayo kwi-YouTube kunye nazo zonke ividiyo ozibonayo. Ngoko nokuba ubuke umboniso womculo weRick Astley, okanye ufune 'amantombazana e-bikinis', konke kungena kwisiseko se-YouTube. Le ngcaciso iphantsi isetyenziselwa ukucebisa amanye amavidiyo kuwe kwibarbar. Le ngcaciso iphinda ikhethiweyo yamaphi na abaphandi abanokuhlawulwa ukuba bajonge ebomini bakho.
Indlela ukungena ngemvume kwe-YouTube kunokukuchaphazela ngayo: iimfuno zakho ezizimeleyo zingasetyenziswa kwaye zisetyenziswe ngokumelene nawe ngamalungu entsapho okanye nabani na ofuna ukukulimaza ngokwemvakalelo kunye neentloni. Kwimeko embi kakhulu, iindlela zakho ze-YouTube zingasetyenziselwa ngabaphandi kunye nabashutshisi xa usenokumangalelwa ngokungalunganga okanye ukungalunganga.
Unalo ulawulo lokungena ngemvume kule YouTube. uchaza indlela apha.
I-'In-Market 'Yakho Amagqabantshintshi' Ingena
'Inxalenye yentengiso': oku kusetyenziselwa ukuqhuba ukukhangisa kunye nomxholo wephepha.
Ngokuqinisekileyo uhlobo lokulandelela lweGoogle kunye ne-Google Analytics lufakela ngawe. 'Amacandelo e-Marketplace' yiindidi ezibanzi zentengiso ebonisa wena. Njengoko uza kubona kwisibonelelo esingentla ngentlawulelo, inani elikhulu leeseshoni (ukutyelela) lwenziwa ngabantu abanomdla 'kwingqesho', landelwa ngabantu abanomdla 'kwiTyelelo / iIhotele kunye neencomo'.
Ingxenye ye-market inokuchaphazela njani: yiyo iGoogle kunye ne-Facebook kunye ne-Bing iya kulungisa iintengiso ezibonakala kwicala lakho lewebhu. Olu datha luza kunceda abantu abathile be-webmaster banqume indlela yokulungisa umxholo wabo wekhasi ukuba babhenele kangcono kuwe.
Unalo ulawulo oluthile kwii-tags zakho zecandelo le-market. uchaza indlela apha.
Indawo Yakho Yomzimba kunye neMbali Yokuhamba Ingena
I-Google inokurekhoda zonke indawo eziphathekayo zezixhobo zakho!
Ngaphandle kokuba ucime okanye udibanise iimpawu zakho ze-geolocating, iGoogle iya kugcina imbali apho i-smartphone yakho ihambe khona, nalapho ikhompyutha yakho yekhompyutha ikhona khona. Lo mngcipheko wobungasese wobuntwini kubantu abangafuni ukutyhila apho bahamba khona.
Indlela i-geotracking inokukuchaphazela ngayo: ukuba uyasityholwa ukutshitshisa okanye olunye ulwaphulo-mthetho, ke le geo-tracking.nokusetyenziswa ngokuchasene nawe ngabaphandi kunye nabatshutshisi. Ngakolunye uhlangothi, ingasetyenziswa ukucima igama lakho lokungalunganga.
Unalo ulawulo lokungena kwi-geolocation logging. uchaza indlela apha.
Iinkcukacha Zakho zobuntu zikwabelwana nabashicileli bezakwethu
Iiwebhsayithi ezisebenzisa 'i-Google Analytics' ziyakwazi ukubona iinkcukacha zobuntu malunga nawe.
Ukufikelela kweGoogle kuqhube ngakumbi kuneendawo zeGoogle.com kunye ne-YouTube.com. Nayiphi iwebhusayithi esebenzisa isofthiwe ye-Google Analytics inokujonga iinkcukacha zakho zabantu. Oku kuthetha ukuthi: ubulili, ubudala, i-geolocation, izinto ezikhethiweyo kunye nezinto ezithandayo, iinkcukacha zakho zeekhompyutha, kunye neenkcukacha zakho zecandelo lemakethe zithengiswa kwiwebhsayithi, kunye neentsingiselo zegama eliphambili ozisebenzisayo ukufumana le website.
Ezi nkcukacha zentlalo zithathwa kwi-akhawunti yakho ye-Gmail / ye-Google +, ngoko ngokwenene wanikezela le nkcukacha kwi-Google xa ubhalisele enye yeenkonzo ezimbini ezikhululekile!
Indlela i-Google Analytics inokukuchaphazela ngayo: ngelixa abaninzi abasebenzisi abayi kuba namava amaninzi ukusuka ekulandeleni i-GA, le ngcaciso ingasetyenziselwa ngabathengisi be-intanethi ukusetyenziswa kwamanani abo ukulungiselela iimfuno. Umzekelo: umthengisi weetheyithi wendiza ye-intanethi ubona ukuba ukhangele 'iindiza eziphuthumayo kwiDenver'. Ukuba ubuya kuthi kamva ngaloo mini ukuba uhlole kwakhona amaxabiso, lowo mthengisi angakhetha ukuphakamisa intlawulo yeetikiti zeenqwelo zee-Denver ezibonisa kuwe kwi-intanethi.
Yonke i-Google Usesho Owenzayo Yayangena
Ewe, iGoogle ilandelela yonke into oyenzayo (ngaphandle kokuba uthetha ngenye indlela).
Oku akufanele kumangaliswe; I-Google iyigcina yonke ibinzana elingundoqo elingasetyenziswe ngumsebenzisi ngamnye kumhlaba. Amawaka e-disk ejikelezayo ngeenxa zonke ze-Google zizaliswe ngamagogi okufunwa ngabantu, kuzo zonke iilwimi ezisetyenzisiweyo.
Indlela oku kulandelwa ngayo lo mkhondo wokukhangela: ukongezelela ekusetyenzisweni ngokuchasene nawe ekushushisweni kobugebengu, umphumo uya kuba nayiphi na inhlazo onokuyenza ngayo malunga nabantwana kunye nabasebenzi osebenza nabo; I-Google izakubonisa uphando lwakho lwakutshanje njengesicatshulwa esilandelayo (ukuzalisa ngokuzenzekelayo) kwibha yokukhangela yeGoogle. Ukuba awufuni abantu babone oko ufunayo kwi-Intanethi, uya kulungela ngokufihla le mlando wophendlo.
Unalo ukulawula malunga nendlela ukukhangela kwakho kungene ngayo. uchaza indlela apha.
Iifayile zakho ze-Google Voice zigcinwa ngonaphakade
I-Google Voice izingodo zonke zophando ozenzayo.
Ukuba ukhetha ukusebenzisa i- 'Google Google '(i-Google Voice) ukukhangela ngezwi, kunokunceda kakhulu ukusetyenziswa kwezandla ngexesha lokuqhuba. Kodwa yazi ukuba zonke iilwimi zophando ozenzayo, njengazo zonke uphando lweGoogle.com, zigcinwe kwiinkcukacha zeGoogle. Umzekelo weskrini esezantsi usisigxina, ngokuqinisekileyo, kodwa ukuba usebenzise i-Google Voice ukwenza ukutshekisha, qaphela.
Indlela oku kunokukuchaphazela ngayo: ngaphaya kweyiphi na intshutshiso yecala enokuthi ufanele uthabathe olunye usuku, qaphela ukuba ukhawuleza wenze ukukhangela okungekho mthethweni kwi-smartphone yakho. Kungenzeka nakakhulu: qaphela ukuba abahlobo bakho bangakuqhathanisi ngokusebenzisa i-Google Voice ukukhangela izinto ezihlazo okanye eziphikisayo kwi-smartphone yakho!
Unalo lawulo lokungena kwiGoogle Voice. uchaza indlela apha.
I-Google igxininisa ukuThengisa okujoliswe kuyo kwi Window yakho, ngokusekelwe kwizinto ozixelelayo
Ukukhangisa okujoliswe kuko: unokulawula * oku kuGoogle.
Le ngongoma yonke yokuqokelela idatha yeGoogle: ukukwazi ukutshintshela iintengiso ezijoliswe kuzo zonke izigidi zabo zabafundi . Kwaye, i-Google ihlawulisa amaxabiso aphezulu ekukhangiseni ngenxa yokuba inokuthembisa ukuhanjiswa okujoliswe kuzo kwizigidi zabantu zabafundi.
(buyela kwiphepha eliphambili le nqaku)
Lapho Unokunciphisa Ukuboniswa Kwakho kweGoogle
Myaccount.google.com: unokunciphisa i-Google footprint apha.
Nangona awuyi kuphelisa ngokupheleleyo iingubo ezinjengeGoogle ekuqokeleleni idatha kuwe, kunokwenzeka ukunciphisa ubuninzi bomi bakho bugcinwe kwiinkcukacha zeGoogle.
Ukususela ngoJuni ka-2015, unokubona zonke izicwangciso ze-akhawunti yakho ye-Google kule URL:
Le yilapho i-akhawunti yakho ye-Gmail / ye-Google Plus / ye-YouTube iphakathi. Ukuba ufuna ukulawula oko iGoogle ilandelwa ngawe, iya kwi-URL engentla kwaye uklikha kwikhonkco ebizwa ngokuba ' Ulawulo lwezeMisebenzi'. (Uya ku funeka ungene kwi-akhawunti yakho ye-Gmail / Google Plus / ye-YouTube ukuze usebenze.)
Xa ufika kwikhasi le-myaccount, qhafaza kwiMisebenzi yoLawulo . Kulapho uza kubona ezininzi iindlela ezilandelayo:
'Ukukhangela kwakho kunye nomsebenzi wokuphequlula'
'Indawo oya kuyo'
'Ulwazi oluvela kumadivayisi akho'
'Izwi lakho likhangela kwaye liyalela'
'Iividiyo ozifunayo kwi-YouTube'
'Iividiyo ozibukele kwi-YouTube'.
Ukucela iGoogle ukuba ikuyeke ukulandelela, funda iqhosha lokujikeleza iqhosha kwaye uyibeke 'kumiswe okwesikhashana' (xa iqhosha lokujikeleza iqhosha lixhaswa ngakwesobunxele). Uzakufuna ukuphinda le nto nganye kwiindidi ezi-6.
Qaphela ukhetho olumkileyo lwegama ngeGoogle ukuthi 'ukumiswa okwesikhashana' kwaye 'kungabikho'. Oku kuthetha ukuba i-Google inako, kwaye mhlawumbi iya kuvula enye yale mpawu kwakhona ngaphandle kokukwazisa.
Akusiqinisekiso sobumfihlo, kodwa oku kunciphisa ukukhanya kwakho. Ngethuba nje ukhetha ukusebenzisa i-Google kunye neenkonzo ze-YouTube kwi-intanethi, le yinto eyimfihlo kakhulu ongayicela kuyo kwi-search king.
Inhlanhla, kunye nokuba unokuhamba ngokukhuselekileyo kwaye ujabule kwiWebhu!
Ukulondoloza i-router yakho entsha engenazintambo
Izifundo Zokhuseleko Singazifunda 'kuMnu Robot
Ngaba iRansomware egcina ikhompyutha yakho yoNyaka?
Ibhizinisi Lenu Elincinci LiyiNtloko yeThagethi!
Kutheni Ndifanele Ndizisebenzise IiNgxoworho Zemihlali Yezokuphepha
Iinyaniso Nge-Facebook Chain Updates Status
Indlela yokusekwa koLawulo lwabazali kwi-iPad, iPod Touch, okanye i-iPhone
Iimpazamo zokuKhusela ezingakubeka kwingozi
Iimodeli zeeNkxaso zeMfono zeFowuni
Yintoni i-Cloud Hosting?
Ufuna ukukhawuleza i-ProStreet Cheats ye-PC
Yintoni i-Touchscreen kwaye iSebenza njani?
INkosana yasePersia: Iqhawe elingaphakathi kweeNkohliso - iGamecube
Imbali yeMidlalo yeVideo yeClassic - I-CD-ROM Revolution
Yintoni iMask Mask?
Ubungozi bokuvumela abantwana ukuba bahlasele i-PSP yabo
Indlela yokubuyisela kwakhona umyalelo wokuLawula kwiFayile
Ama-Receivers ase-Onkyo angama-2016 e-RZ-Series
IiNkcazo zeMinecraft zichazwe: Abahlali
Ukunika i-Bluetooth GPS kwi-Calling free-Hands
Funda indlela yokusebenzisa i-Toolbar yokuhlaziya kwi-Photoshop
Iindidi zeeAkhawunti ezifanele ukuba ne-2FA
Ungakwazi ukwandisa i-iPhone Memory?
Iikhowudi zokukhohlisa ze-Incredibles - PS2
Inkcazo yegama le-Domain kwiBlogging
Iimfuno zeMebho yeWebhu
Yintoni 'i-PMSL'? Iyintoni i-PMSL?
Yakha Uze wenze i-AutoCAD Tool Tool Palettes
Ukusebenzisa i-HTML ecebileyo kwi-Mail Mail okanye kwi-Outlook Signature
Ukukhuphela okanye ukuHlala kweHlabathi yamaHholide kunye neKrisimesi Umculo Lo nyaka